Nke mbu, teknụzụ teknụzụ shingle
1 Usoro owuwu nke osisi cedar
Mwube mbadamba ifesa ọka ọka → Mwube n'akụkụ mmiri → Mwube taịl nke kwụgbọrọ construction owuwu ụlọ → ihe owuwu ụlọ → nlele
2 Ntụziaka nwụnye nke ụlọ shingle
2.1 Ntọala ntọala
Mgbe ị natasịrị elu ụlọ ma kwadebere maka owuwu, a ga -ebu ụzọ rụọ ntọala n'akụkụ eriri mmiri ahụ. Dabere na ihe osise a chọrọ, a na -ahọrọ ebe mbụ kachasị elu nke cornice dị ka ntụaka, a na -ewere ebe a dị ka ebe ntụaka nke ịdị elu ọka, mgbe ahụ, a na -eji ọkwa infrared maka ịhazi na ịtọpụ, yana A na -echekwa ịdị elu nke ọka ọka n'otu ọkwa site na nha. Nke a na -edozi nke ọma ihe mmetụta anya sitere na ekwekọghị n'ogo ọka. E gosiputara usoro a kapịrị ọnụ na foto a.
① Malite site na cornice S1, jiri ray infrared tụọ ya, were ebe kachasị elu dị ka ebe datum, tụọ ya site n'ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ, wee chọpụta ịdị elu nke ọka ọka South n'akụkụ eriri mmiri.
② Malite na S2, ọkwa ya na ụzarị infrared, were ebe kachasị elu dị ka ebe datum, larịị site n'ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ, chọpụta ịdị elu nke ikpo okwu dị n'etiti n'etiti ihe mgbochi mmiri, wee jiri eriri ọcha jikọọ S1.
③ Malite site na cornice S3, jiri ray infrared ruo ọkwa, were ebe kachasị elu dị ka ebe datum, larịị site n'ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ, wee chọpụta ịdị elu nke cornice North n'akụkụ mmanya.
2.2.Counter batten nke n'akụkụ mmiri warara na taịl eriri
Nkọwa mmiri mmiri ozuzo ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 50 mm * 50 (H). A ga-eji osisi MM na-emegide osisi corrosion dị n'okpuru ala. Nke mbu, ahịrị ahịrị nke eriri warara ga -agbago n'elu ụlọ dịka oghere dị 610mm chọrọ. A ga -eji ihe mkpuchi nchara galvanized dị 2mm mee ihe, a ga -ejikwa iberibe atọ dị ka oghere oghere 900mm Ø 4.5 * 35mm siri sie ike na ntu ntu, mgbe ahụ, a na -eji mkpọchi mkpọsa m10nylon gafere site na mgbada mgbada. maka ọgwụgwọ nkwado. Oghere nkwado ahụ dị ihe dịka 1200mm n'akụkụ ntụpọ nke mgbada dị n'okpuru ala maka ịgha mkpụrụ, a ga -edozikwa ihe mgbada ahụ dị ala. A ga -ahazi ọkwa mgbada ya nhatanha, a ga -edobe ntu ya nke ọma. Ọ bụrụ na n'ihi nsogbu nrụpụta, enweghị ike ịwụnye eriri dị ala n'akụkụ ụlọ ahụ, ọ nwere ike jupụta na Styrofoam n'etiti warara dị n'okpuru na oghere oghere ahụ.
②100 * 19 (H) mm fumigation osisi corrosion (ọdịnaya mmiri 20%, usoro nke osisi mgbochi corrosion 7.08kg /㎡, njupụta 400-500kg /㎡) ka a na-eji maka warara tile. Nzọụkwụ mbụ dị ihe dị ka 50 mm site na cornice, nzọụkwụ nke abụọ dị ihe dị ka 60 mm site na ahịrị mgbago. A ga -eji kposara igwe anaghị agba nchara 304 Ø4.2 * 35mm dochie eriri taịl na -adọkpụ na warara dị n'okpuru. A ga -ahazi warara taịl na -adọkpụ nhatanha, a ga -edokwa ntu ahụ ka ọ kwụsie ike, iji hụ na elu taịlọn ahụ dị larịị, ahịrị na kọlụm adịchaghị mma, ihe jikọtara ọnụ na -esi ike, cornice kwụ ọtọ. N'ikpeazụ, a ga -eme nyocha nwoke ahụ.
2.3 Owuwu nke akpụkpọ mmiri na -eku ume
Mgbe etinyere eriri eriri ụlọ ahụ, lelee na ọ nweghị ihe dị nkọ nke na -esi na warawara taịl n'elu. Mgbe nyocha ahụ, dina akpụkpọ ahụ mmiri na -eku ume. A ga -edobe akpụkpọ ahụ na -egbochi mmiri na iku ume n'akụkụ ntụpọ mmiri ahụ n'aka ekpe na aka nri, na nkwonkwo ụkwụ agaghị erughị 50 mm. A ga -atọgbọrọ ya site na ala ruo n'elu, na nkwonkwo ụkwụ ga -adị 50 mm. Mgbe ị na -edobe akpụkpọ ahụ mmiri na -anaghị eku ume, a ga -etinye taịl n'elu ya, a ga -ejikọkwa akpụkpọ ahụ mmiri na -eku ume.
A na -eji polypropylene na polyphenylene dị ka akpụkpọ mmiri na -eku ume na iku ume, a na -ejikwa akpụkpọ PE n'etiti. Ngwongwo tensile bụ n / 50mm, ogologo ≥ 180, transverse ≥ 150, elongation% na oke ike: transverse na longitudinal ≥ 10, permeability mmiri bụ 1000mm, na enweghị mgbapụta na kọlụm mmiri maka 2h.
2.4 Nrụpụta taịlị kwụgidere
Maka owuwu ụlọ, a na -eji kposụ nke onwe iji dozie taịl ahụ kwụgidere na warara taịl dị ka oghere oghere tile, a na -eji ntu abụọ maka ibe ọ bụla, yana kposara igwe anaghị agba nchara 304 Ø 4.2 * 35mm . Usoro nke taịlị kwụgidere bụ site na ala ruo n'elu. A na -etinye akwa mkpuchi mgbe etinyere tile ahịrị ala. Taịlọn elu dị n'elu jikọtara ya na taịlị ala site n'ihe dịka 248mm. A na -eji taịl kpuchie elu taịlị ahụ na -enweghị enweghị oghere ma ọ bụ na -atọghe. N'ọnọdụ enweghị aha ma ọ bụ na -atọghe, ekwesịrị idozi ma ọ bụ dochie tile ahụ n'oge. Ahịrị taịl ọ bụla kwesịrị ịdị n'otu ahịrị kwụ ọtọ. Iji hụ na nsọtụ dị n'otu ahịrị, ekwesịrị ịgwọ oke ọka cornice n'ụzọ zuru oke.
Ahịrị nke dị elu kwesịrị ikpuchi oghere dị n'etiti ngọngọ abụọ n'ahịrị dị ala, na ọnọdụ ntu ahụ ga -enwe ike ikpuchi ahịrị nke abụọ nke shingles. Ya mere, ahịrị nke mbụ na-abụkarị okpukpu abụọ. Ụfọdụ anya site n'elu nke ahịrị nke mbụ na -ama jijiji na nwụnye ahịrị nke abụọ. Ahịrị nke abụọ kwesịrị ikpuchi oghere na ntu ntu n'ahịrị mbụ nke shingles dị n'elu. Shingles na waterproofing na -rụrụ n'otu oge, na na. Nke ahụ bụ, akwa shingles, akwa mkpuchi mmiri, nke mere na mkpuchi mmiri abụọ agaghị ebute ihe mgbapụta.
2.5. Ntinye nke tile Ridge
A na -etinye taịl taịl abụọ. Nke mbụ, jiri eriri kposara onwe gị dochie eriri kwụ ọtọ na warara kwụ ọtọ, dozie ọkwa ya, hụkwa na ọ nweghị mgbanwe ọ bụla. Na nkwonkwo ụkwụ nke nnukwu taịl na taịl ahụ, dina ihe mkpuchi mkpuchi mmiri na-anaghị egbochi onwe ya n'akụkụ ntụzịaka ahụ. A na -ejigide taịl elu ụlọ ahụ ka ihe mechiri emechi mechie, wee mezie taịl ahụ n'akụkụ abụọ nke warara taịlị ahụ na kposara onwe ya. Ekwesịrị ikpuchi taịl ahụ nke ọma na nke ọma.
2.6 Gburugburu azụmaahịa
A na -etinye ihe na -amị amị (ya bụ, nsị mmiri) site na njikọ ọnụ. A ga -ebu ụzọ tinye bọọdụ ọwa mmiri nke aluminom na ọnọdụ gintị nwere mmasị, mgbe ahụ, a ga -arụnye taịl elu ya. A ga -akụwa ahịrị mgbada nke gbagọrọ agbagọ nke ọ bụla. Ahịrị ịkpụ ga -abụ ahịrị etiti nke ọwa mmiri, a ga -ejikwa gluu emeso njikọ ịkpụ nke ọwa mmiri. A na -etinye ụfọdụ ọwa mmiri dị mkpụmkpụ site na ịpịkọta mkpịsị ụkwụ, wee mechie nkwonkwo butt. Mgbe otu akụkụ nke bọọdụ igba mmiri adịghị ogologo, a ga -anabata usoro ịgbanye ọtụtụ akụkụ, nrụnye ga -amalite site na ala. Mgbe ị na -atụgharị, a ga -etinyerịrị akụkụ nke elu na akụkụ ala nke efere ọwa mmiri, na ngọngọ nke akụkụ abụọ ahụ ekwesịghị ịbụ ihe na -erughị 5cm.
2.7. Nwụnye nke eaves ihe mgbochi grate
Ntinye ihe nkedo ọka: a na -eji mbadamba osisi ahaziri otu ihe ahụ dị ka tile osisi, nke a na -ahazi ma tinye ya dịka ọnọdụ saịtị ahụ dị n'ezie. A na -edobe ya na warara taịl na -ekogide ya na oghere ịghasa 300 mm. Ọkpụkpụ njikọ dị n'etiti bọọdụ enweghị nkebi na ewepụghị.